29.9.2017 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါအပါအဝင် အခြားသောခေါင်းကိုက်ရောဂါရှိသူတွေမှာ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းပါးသည့်ရောဂါ Hypothyroidism ဖြစ်ဖို့အလားအလာပ...
ပါးစပ်အနာဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ?
28.9.2017 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ပါးစပ်မှာ ပေါက်တဲ့အနာတွေက မိသားစုရာဇဝင်ရှိလို့ (သို့) ကျန်းမာရေး အခြေအနေတစ်ခုခု စတဲ့ ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တဲ့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင်...
ကလေးတွေမှာ နားပိုးဝင်ခြင်းအတွက် ပိုးသတ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါသလား?
28.9.2017 | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ပိုးသတ်ဆေးတွေက နားပိုးဝင်ခြင်းကိုကုသရာမှာမကြာခဏသုံးလေ့ရှိပေမယ့် အချို့ကိစ္စတွေမှာတော့ ဆရာဝန်ကပိုးသတ်ဆေးမပေးသေးဘဲနဲ့ စောင့်ကြည့်ရုံပဲစောင့်ြ...
27.9.2017 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကိုယ်အရမ်းပူလာတဲ့အခါမှာ ချမ်းတုန်တာကို ကြုံတွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။
ပြင်းထန်စွာ လေပွလေထခြင်းကို လျစ်လျူမရှုသင့်
1. ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်းဟာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေပူထခြင်းရဲ့ အရေးကြီး သတိပေးလက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အစားလျှော့တာမျိုး၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာ...
ဘာကြောင့် အမျိုးသား 60% လောက်က ဆရာဝန်သွားမပြကြတာလဲ?
26.9.2017 | အမျိုးသားများနှင့်ကျန်းမာရေး
အမျိုးသားတွေက အများအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကို စိတ်ဝင်စားလေ့မရှိကြပါဘူး။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ အသက် 18-70 နှစ်ရှိအမျိုးသား 500 ကျော်ကို စ...
သန္ဓတားဆေးတွေက ဝက်ခြံကိုကုသရာမှာ အသုံးဝင်သလား? ဒါမှမဟုတ် ဝက်ခြံကိုပေါက်စေသလား?
26.9.2017 | အမျိုးသမီးများနှင့်ကျန်းမာရေး
သန္ဓေတားဆေးမှာပါဝင်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေက မွေးညှင်းပေါက်များမှ အဆီထွက်ရှိမှုကို အားပေးတဲ့ အန်ဒဂိုဂျင် (Androgen) ဟော်မုန်းကို ပိတ်ပင်ရာမှာ ကူညီေ...
26.9.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
ဒီအပင်တွေမှာပါဝင်တဲ့ apigenin ဆိုတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးက အာရုံကြောဆဲလ်တွေအကြား ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ဦးေ...